Kudonha kudiridza kwakateedzana FAQ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, Ltd.
Ini ndinoda firita yekudonhedza kudiridza?
Ehe. Zvese kudiridza hurongwa zvinodiwa kuva ne Sefa. Hazvina mhosva kuti yakachena sei mvura yako, a Sefa iri inishuwarenzi yakachipa yekuchengetedza marara anopinda ako kudiridza hurongwa. Kunyangwe zvidimbu zvidiki zviri mumvura zvinogona kukonzera donha emitters kuve akavharwa.
Ndeipi nzira iyo mucherechedzo weruvara rinotarisana kana uchiisa?
Tarisa kumusoro, kuitira kuti panobuda mvura panotarisana kumusoro kudzivirira matope, jecha nemasora kubva pakupinda.
Ini ndinofanira kukwiza sisitimu yangu mushure mekunge ndaisa fetereza?
Nguva dzose kugeza iyo system mushure mekudyara kuchengetedza zvakanaka yako kudiridza hurongwa. Izvi zvinonyanya kukosha kana uchishandisa organic mafetiraiza.
Ini ndinoshambidza sei drip yekudiridza system?
Flush iyo system nemvura yakachena zvinotevera: kugeza mainines anotanga, kwobva kwamboita mitsara uye pakupedzisira iyo donha mitsara nekuvhura mitsara yakati wandei panguva (semuenzaniso: gumi mitsara) kuitira kuti kumanikidzwa kwakakwana kugadziriswe kuti uwane simba kugeza. Flush mitsara ingangoita 1 mineti kana kusvika mvura yajeka.
Ndeupi musiyano uripo pakati pekudonhera tepi uye yekudonha mutsetse?
Donhwe mutsetse yakafanana ne donhwe tepi mukuti ine emitters emhando dzakasiyana dzekubuda akaiswa panguva dzakaenzana, asi zvakafanana zvinomira ipapo. Kusiyana donhwe tepi, mutsetse wekudonha yakaganhurirwa pakureba kusvika kumiganhu yakafanana yepoly tubing yehukuru hwakaenzana
Maitiro Ekuverenga Kudonhedza Irrigation kuyerera？
(1)Wedzera huwandu hweanotumirwa neGPH kuti uwane yako yakazara kudonha kudiridza kuyerera chiyero, kana ese emitters ako aine iyo yakafanana GPH mwero.
(2)Semuenzaniso, kana iwe uine makumi maviri emitters ayo ese ane kuyerera kwekuyerera kwe2 GPH, yako yakazara kudonha kudiridza kuyerera kuri 40 GPH (20 emitters x 2 GPH = 40 yakazara GPH).
Inodonha tepi emitters inokwira kumusoro kana kudzika?
Chero ipi nzira yaunosarudza kuisa yako donhwe tepi ndapota simbisa iyo emitters kumeso kumusoro. Izvi zvinoderedza kuvhara kunokonzerwa nekuyamwa mukati mevhu uye marara pakavharwa-pasi. Kazhinji kufukidza iyo tepi nemasendimita mashoma chete evhu kana mulch inobatsira zvikuru.
Iyo tepi inodonha inogara kwenguva yakareba sei?
Kusvika papi ichaita iyo Drip Tape yekupedzisira? 8-mamir donhwe tepi inoshandiswa kamwe uye yakaraswa. 10-mamir tepi inowanzo shandiswa kune ivhu rine matombo kana zvirimwa zvepamusoro. 15-mamir tepi inowanzo kuve yakanaka kwemakore 3-5 se refu sezvo firita uye mutongi vari kushanda nemazvo.
Ndinogona kushandisa zvakare donhwe tepi?
Kana usiri kukura gore-rese mubindu iwe inogona kushandisa zvakare iyo tepi mumwaka unotevera wekukura. Ingo ita shuwa yekushambidza zvese zvinokwana uye nekunyatso bvisa ivhu uye grit kubva kune yakakomberedza nzungu uye barb kuitira kuti vashande zvakanaka nguva inotevera kana iwe uchiishandisa.
Inogona here kudonha tepi?
Drip tepi inogona iva akavigwa kusvika kumasendimita matanhatu pakadzika muvhu. Anowanzo viga yake chete tepi dzakakomberedza matatu kusvika mana inches pakadzika muvhu.
Unoita sei unclog tepi donhwe?
Vhura vharuvhu yesuwo patsime remvura kana kana uchishandisa pombi yemvura, tenderedza pombi yemvura uye unomhanya kudiridza system kweinenge awa. Izvi zvichave nechokwadi chekuti acid-yemvura mhinduro inounzwa muhurongwa kuburikidza neiyo mainline uye izvi zvinojekesa mabhakitiriya anovaka mukati meiyo system.
Mitsetse yekudonha inovhara here?
Nehurombo, iyo tubing mu donhwe system inogona kuvharika nemaminerari kana mabhakitiriya anovaka. Kubvisa iyo system nemvura kanokwana katatu pagore unokwanisa bvisa zvipingamupinyi zvidiki uye kudzivirira mabhegi kubva pakuumba pakutanga. Kana yako system yakanyatso kumiswa, iasidhi inomhanya inogona kudikanwa
Ndinoita sei kusavhara madiridziro angu?
1.Kutanga ita chokwadi chekutendeuka kwekusasa system kunzvenga zviitiko.
2.Tevere iwe unozofanirwa kubvisa ese emumvura mahabhu nemisoro.
3.Wobva wavhura mvura uye rega iite ichimhanya kudzamara mvura yoyerera kubva pamusoro wega wega kuvhura kuburitsa chero marara mukati mekusasa hurongwa
Ndeupi musiyano uripo pakati petripline uye yekudonha tepi?
Ndeipi iri nani donhwe tepi kana donhwe mutsetse?
Kana marefu akareba achidikanwa, senge mune zvekurima kana nzvimbo refu dzekugara, donhwe tepi kazhinji ndiyo yekuenda kumhinduro. Drip tepi inowanzo shandiswa mune yakaderera kumanikidza kunyorera, kushanda zvakaringana pa8-15 PSI. Ndichiri donhwe tepi inogona kushandiswa muhurefu hwakareba kupfuura poly tubing uye mutsetse wekudonha, haina zvachose isina muganho